नेप्से बढ्यो, कारोबार रकम घट्यो - Naya Patrika
मंगलबार नेप्से परिसूचक चार दशमलव ८९ अंक बढेर बन्द भएको छ । बजार खुलेको केही समयपछि नै नेप्से परिसूचक तीव्र गतिमा उकालो लागेको थियो । यस दिन नेप्से उतारचढावपूर्ण रह्यो । यसले लगानीकर्ताहरू अन्योलमा रहेको संकेत गर्दछ । नेप्से परिसूचक बढे पनि यस दिनको कारोबार रकम भने घटेको छ ।
यसले लगानीकर्ताहरू ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको संकेत गर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएका कारण बजार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको हो । वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर नबढाउने सहमति गरेसँगै लगानीकर्ताहरूले केही राहत महसुस गरेका छन् । बैंकहरूले बचतमा आठ प्रतिशत र मुद्दतीमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नलिने सहमति गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार कर्जाको ब्याजअन्तर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी भएमा शाखा विस्तार र बोनस सेयरको कर प्रयोजनबाहेकका नगद लाभांश घोषणा तथा वितरणमा रोक लगाउने व्यवस्था गरेको छ।
नेप्से परिसूचक सकारात्मक हुँदा कारोबार रकमले भने यस दिन साथ नदिएको देखिन्छ । यस दिन म्यानुअल टर्नओभरसहित रु. २३ करोड ७० लाख ३० हजार ३ सय ८७ बराबरको सेयर खरिदबिक्री भएको छ । यो कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा २४ दशमलव ३१ प्रतिशत कम हो । यस दिन १ सय ५६ कम्पनीको ३ हजार १ सय १७ पटकको कारोबारमा ५ लाख ५५ हजार ७ सय २२ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । ‘क’ वर्गको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स यस दिन एक दशमलव ३० अंक बढेर २ सय ७२ दशमलव ७७ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेको १४ दिने आरएसआई यस दिन पनि ओभरसोल्ड जोनमा नै रहेको छ । २९ दशमलव ३६ स्केलमा रहेको यस आरएसआईले बजारमा सेयर बिक्री चाप बढी रहेको संकेत गर्दछ । लगानीकर्ताको सम्पत्ति भने अघिल्लो दिनको तुलनामा रु. पाँच अर्ब ७२ करोड बढेर रु. १५ खर्ब पुगेको छ ।
कारोबार संख्या र कारोबार रकमका आधारमा यस दिन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स अगाडि रहेको छ । यस दिन सो कम्पनीको १ सय ९० पटकको कारोबारमा रु. २ करोड २१ लाखभन्दा बढीको सेयर खरिदबिक्री भएको छ । सेयर संख्याका आधारमा भने यस दिन जनता बैंक अगाडि रहेको छ ।
सो बैंकको यस दिन ३५ हजार १ सय ८३ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ । यस दिन श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्स कम्पनीको सेयरमूल्य सात दशमलव १४ प्रतिशत बढेको छ । त्यसैगरी, अरुण फाइनान्स र एभरेस्ट इन्स्योरेन्सको सेयरमूल्य चार प्रतिशतभन्दा बढी सस्तिएको छ । कारोबारमा आएका १ सय ५६ कम्पनीमध्ये ७७ कम्पनीको सेयरमूल्य यस दिन बढेको छ भने ५१ कम्पनीको सेयरमूल्य घटेको छ । बाँकी २८ कम्पनीको सेयरमूल्य यस दिन स्थिर रहेको छ ।
यस दिन बिमा, उत्पादनमूलक र माइक्रोफाइनान्स समूहको परिसूचकबाहेक अरू सबै समूहको परिसूचक बढेको छ । होटेल समूहको परिसूचक यस दिन सर्वाधिक तीन दशमलव चार प्रतिशत बढेको छ । त्यसैगरी, अन्य समूहको परिसूचक एक दशमलव शून्य दुई प्रतिशत, जलविद्युत् समूहको शून्य दशमलव ६१ प्रतिशत, बैंकिङ समूहको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत, वित्त समूहको शून्य दशमलव ४८ प्रतिशत र विकास बैंक समूहको शून्य दशमलव एक प्रतिशत बढेको छ । कारोबारमा आएको उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक एक दशमलव ४२ प्रतिशत, माइक्रोफाइनान्स समूहको शून्य दशमलव २९ प्रतिशत र बिमा समूहको शून्य दशमलव १७ प्रतिशत घटेको छ ।
समयावधिभित्रै अनलाइन कारोबार प्रणाली लागू गर्न फोरमको माग
सम्झौता गरिएको समयावधिभित्रै धितोपत्र बजारमा अनलाइन कारोबार प्रणाली लागू गर्न माग गर्दै नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमले अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ । पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि विगतमा उठाइएका मागहरूको समयमै सम्बोधन नहुनाले हाल नेप्से निरन्तर ओरालो लागिरहेको फोरमको बुझाइ छ । सोमबार फोरमले १६ बुँदे माग उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो ।
फोरमले ब्रोकरको संख्या तथा क्षेत्राधिकार विस्तार गरी आस्वामा आबद्ध वाणिज्य बैंकहरूमार्फत सेयर कारोबार गर्ने सुविधा विस्तार गर्ने, गैरआवसीय नेपालीहरूलाई पुँजी बजारमा प्रवेश गराउनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने धितोपत्र बोर्ड, नेप्से सिडिएससीलगायतका निकायहरूमा क्षमता अभिवृद्धि गरी पूर्वाधार तथा प्रविधिमैत्री बनाउन पनि माग गरेको छ । नेप्सेको संरचनागत सुधार र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि तत्काल कार्य अगाडि बढाउन फोरमले अनुरोध गरेको छ ।
साथै, ब्रोकर सेवाशुल्क तथा ब्रोकरको प्रवेश र बहिर्गमनलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचलित मान्यताअनुरूप बनाउने, सेयर कर्जामा लगाइएको पुँजीगत जोखिमको भार एक सय प्रतिशतमा झार्ने, सेयर धितोकर्जामा कर्जाको सीमाबजार मूल्यको ७० प्रतिशत पुर्‍याउने, ब्रोकरमार्फत सेयरधितो कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने, सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्डसँग सम्बन्धित ऐन नियम तत्काल निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने, मार्केट मेकर र धितोपत्र व्यापारीलाई छिटोभन्दा छिटो हालको बजारमा प्रवेश गर्ने वातावरण बनाउने, सर्ट सेलिङ, अन्तरदिन कारोबारको व्यवस्था गरी चाँडोभन्दा चाँडो लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउनेजस्ता कार्य शीघ्र्र गर्नुपर्ने फोरमले पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
हाल कायम तीन दिनको राफसाफलाई एक दिन वा कारोबार सकिएको २४ घन्टाभित्र हुने व्यवस्था गर्न पनि फोरमले माग गरेको छ । सूचीकृत कम्पनीहरूले प्रदान गर्ने बोनस सेयर वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको सात दिन र हकप्रद सेयर बाँडफाँट भएको सात दिनभित्र सूचीकृत गर्ने व्यवस्था गर्ने र डेबेन्चर तथा बोन्ड मार्केटलाई व्यवस्थित तथा तरल बनाउने माग पनि फोरमले अर्थमन्त्रीसमक्ष राखेको छ ।
देशले दशकौँदेखि विद्यमान राजनीतिक अन्योल पार गरी आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढेको वेला सेयरबजार ओरालो लाग्नु निकै दुःखलाग्दो भएको फोरमको भनाइ छ । यस्तो समयमा सम्बन्धित निकायहरू प्रतिक्रियाविमुख रहेकाले १५ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताको भावनामा गम्भीर चोट पुगेको फोरमले पत्रमा उल्लेख गरेको छ । उल्लिखित माग पूरा भए लगानीकर्ताहरूको उत्साह बढ्ने र नयाँ लगानीकर्ताले पनि बजार प्रवेश गर्नेछन् । यसले बजार सकारात्मक दिशातर्फ जान टेवा पुग्ने फोरमले बताएको छ ।